FS98 Soodejinta Bilaashka ah ee ugu dambeysay
FS98 Beechcraft King Air B200 NEW
FS98 Beechcraft King Air B200 Waxaa dib uhabeeyay AFX asal ah oo uu qoray Matthew M. McClure, oo leh kobtikada hagaagsan, saqafka, dabada, jajabka iyo qaababka giraangiraha, qalabyo cusub, qalab iyo daboollo, iyo dhiig bax laga saaray Wingroot, qiiqa iyo dabada Raytheon's halyeeyga, iibinta ugu fiican, raaxada 9-pax dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo fulineed fulineed ah King Air B200, oo ay ku shaqeyso labo 850 hp Pratt & Whitney PT6A-42 turboprops, wuxuu lahaa xawaare sare oo ah 294 gunti. Qaabab tayo sare leh oo uu sameeyay Udo Entenmann. Waxaa qoray Stephan Scholz.
Sunday, April 18 2021 23: 11
FS98 Beechcraft MC-12W "Xorriyadda" AFSOC NEW
FS98 Beechcraft MC-12W "Liberty" AFSOC. Waxaa dib uga soo shaqeeyay AFX-da asalka ah ee Matthew M. McClure, oo leh qol hagaagsan, saqafka, dabada, jajabka iyo qaababka giraangiraha, qalabyo cusub, qalab iyo daboollo, iyo dhiig bax laga soo saaray Wingroot, qiiqa iyo dabada. Beechcraft MC-12W ee ku jira AFSOC (Taliska Hawlgallada Gaarka ah ee Hawada) livery, waa unug sirdoon, ilaalin iyo sahan, oo ku qalabeysan Radome iyo IFR pod. MC-12W waa nooc millatari oo ka mid ah Beechcraft King-Air 350, oo ay ku shaqeyso 2x1050 shp PT6A-60A turboprops, oo leh xawaare sare 312 kt. King-Air Turboprop wuxuu ku dhawaaqayaa Aaron R. Swindle. Qaabab tayo sare leh oo uu sameeyay Udo Entenmann. Waxaa qoray Stephan Scholz.
FS98 Beechcraft MC-12 "Xorriyad" USSOCOM NEW
FS98 Beechcraft MC-12 "Xorriyadda" USSOCOM. Beechcraft MC-12 ee ku jira USSOCOM (Taliska Howlgallada Gaarka ah ee Mareykanka), waa unug sirdoon, dabagal iyo sahamin, oo ay ku qalabaysan yihiin Radome, IFR pod iyo winglets. MC-12 waa nooc millatari oo ka mid ah Beechcraft King-Air 350, oo ay ku shaqeyso 2x1050 shp PT6A-60A turboprops, oo leh xawaare sare 312 kt. Waxaa dib uga soo shaqeeyay AFX-da asalka ah ee Matthew M. McClure, oo leh qol hagaagsan, saqafka, dabada, jajabka iyo qaababka giraangiraha, qalabyo cusub, qalab iyo daboollo, iyo dhiig bax laga soo saaray Wingroot, qiiqa iyo dabada. King-Air Turboprop wuxuu ku dhawaaqayaa Aaron R. Swindle. Qaabab tayo sare leh oo uu sameeyay Udo Entenmann. Waxaa qoray Stephan Scholz.
FS98 Douglas DC-8 Super 90 NEW
FS98 Douglas DC-8 Super 90. Douglas DC-8 Super 90 waa casriyeyn khayaali ah oo ku saabsan taxanahii hore ee Super 70 wanaagsan. Waxay ka kooban tahay qol la cusbooneysiiyay iyo CFM56-5B6 cusub (laga bilaabo A319) oo leh xirmooyinka xirmooyinka. Waxaa ka mid ah laba nooc oo diyaaraddayda duulimaadka ah ee Air Global Power (AGP) Worldwide Cargo: passanger iyo nooca xamuulka. Astaamaha: AF99 wareega wareega ah, ugu badnaan qaybaha 3D, qaybo dhaqaaq buuxa. Sidoo kale waxaa kujiray gudiga galaaska DC-8 ee la cusbooneysiiyay oo la mid ah barnaamijyada kale ee loo yaqaan 'MDD cockpits' sida MD-10/11 iyo MD-95 (B717). Gudigani waxaa lagu qalabeeyaa 4 bandhig CRT Astaamaha: qalabyada realCRT ee bilaashka ah, ACS-GPS, GPWS, Cimilada Hawada, liistada hubinta firfircoon. Futher waxaa ka mid ahaa: astaamaha duulimaadka ee dib loo shaqeeyay ee duugoobay DC-8 Super 71 iyo 73 iyo waxqabad buug gacmeed ah. Model waxaa iska leh Kim Simmelink, firfircoonida duulimaadka dhabta ah ee saxda ah, dib u cusbooneysiinta iyo guddiga Andre Lederer (Lionworks).
Sunday, April 18 2021 23: 09
FS98 Atlas Air Boeing 747-200 NEW
FS98 Atlas Air Boeing 747-200. Diyaarad nooceedu yahay Boeing 747-243B (SF) oo loo rogay xamuulka Atlas Air, diiwaangelin: N540MC, Serial No. 22508/499, oo ay ku shaqeyso matoorrada General Gelectric CF6-50C2. Astaamaha: Nalalka soo degaya, qaybaha dhaqaaqa, liistada hubinta iyo dhaqdhaqaaqa duulimaadka waaqici ah ee ku saleysan buugii asalka ahaa (qeyb ka mid ah buugii asalka ahaa ayaa lagu daray). Dheeraad ah ayaa lagu daray: asalka CF6-50 feylasha hawada (astaamaha duulimaadka) ee laba nooc oo kale oo ah B747-200 iyo B747SR oo wata matoorada GeneralElectric. Model waxaa iska leh Bill Alderson, AF99 waxaa cusbooneysiiyay Stephan Scholz, firfircoonida duulimaad ee waaqici ah waxaana dib ugu cusbooneysiiyay Andre Lederer (Lionworks).
Thursday, April 15 2021 23: 32
Gudiga FS98 - Airbus A300-600 / A310 Casriyayn Guddi
FS98 Guddi - Airbus A300-600 / A310 Casriyayn Guddi. Honeywell wuxuu cusbooneysiiyay qolka Airbus A300-600 ee UPS oo leh laba bandhig oo cusub oo LCD ah. Gudigani waa FS98 nooc ka mid ah, kaas oo sidoo kale loo isticmaali karo Airbus A310. Wuxuu soo bandhigayaa bandhigyo realCRT bilaash ah, kumbuyuutarka maaraynta duulimaadka, GPWS, dhawaaq, magac cusub ACS-GPS gaar ahaan gudigan, radar cimilada, cabirka heerka shidaalka, autobrake, dhawaqa bilowga engine iyo waxyaabo badan oo faa'iido badan leh. Nooca labaad ee payware realCRT iyo qalabka Nav Data ee Tony D'Ambrosio ayaa sidoo kale lagu soo daray. Waxaa lagu tijaabiyay 2D, 3D iyo shaashad buuxda ilaa 1280x1024. Waxa kale oo ku jira hagaajin loogu talagalay Boeing 737 Max Panel. Waxaa qoray Andre Lederer (Lionworks).
Wednesday, March 31 2021 23: 02
Muuqaalka FS98 - Kyiv Boryspil Int'l Iyo Gostomel Airport
FS98 Muuqaal - Kyiv Boryspil Int'l Iyo Gostomel Airport. Muuqaal faahfaahsan oo ka socda Madaarka Caalamiga ah ee Boryspil (KBP / UKBB), Ukraine. Waxaa ku jira garoonka diyaaradaha qaabeynta hada oo leh laba runways oo qalabaysan oo dhaadheer, terminaal asal ah iyo labada terminaal cusub (mid albaabbo leh), dhamaan hangarada iyo dhismayaasha, oo inta badan leh qaabab sawir leh, navaids oo dhan, ATIS / ATC, diyaarado caadi ah oo caadi ah, qalabka garoonka, xilli qaabab (baraf xilliga jiilaalka) iyo in ka badan. Intaa waxaa sii dheer waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha 'Gostomel / Antonov-2' (GML / UKKM) oo leh 3500 mitir oo dhererkeedu yahay 'ILS runway runway', oo ah warshaddii hore ee sawir qaade ee Antonov. Kani waa aasaaska halyeeyga 'An-225' iyo dib u habeynta muuqaalkeyga laga soo bilaabo 2003. Muuqaalkan waxaa lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo sawirada dayax gacmeedka ugu cusub ee google Earth, jaantusyada garoonka asalka ah, wargelinta garoonka diyaaradaha. Waxaa sameeyay Andre Lederer (Lionworks).
Wednesday, March 24 2021 01: 38
FS98 Felixstowe Doonta Duulimaadka Weyn ee Mareykanka 1917
FS98 Felixstowe Large America Flying Boat 1917. Felixstowe F2A wuxuu ahaa nooca Ingriisiga lagu dhisay ee Curtiss H-16 "Large America" ​​doon duulaysa, oo la soo saaray 1917 oo matalaysay talaabada ugu dambeysa ee isbeddelka naqshadeynta doonta doonta Curtiss Model H. Iyada oo ka dheer Felixstowe F2, iyo hagaajinta, xoojinta guntin by Lt. Cmd. Cyril Porte, F2A-yada waxaa ku shaqeynayay 350 Hp Rolls Royce Eagle VIII matoorada, iyagoo ku guuleystay xawaare sare oo ah 92 mph heerka badda. 100 cutub oo F2A ah ayaa laga dhisay Saldhigga Cirka ee Naval ee Felixstowe. Waxay ku hubeysnaayeen ilaa toddobo Lewis MGA, waxayna qaadi karaan 2x230 lb qoto dheer ama bambooyin 4x100 lb ah. Qeybta lagu soo saaray sii-deyntaan waa Cutubka No.4081 oo ku saleysan RNAS Felixstowe. Waxaa ku jira guddi khaas ah oo loogu talagalay cabirrada caadiga ah. Waxaa qoray Stephan Scholz.
Wednesday, March 24 2021 01: 27
FS98 FedEx Airbus A300-600. Federal Express A300-600 xamuul labalaab oo xamuul ah oo ay ku jiraan Airbus A300F4-605R ee FedEx, diiwaangelin: N692FE, Serial No. 878, oo ay ku shaqeyso General Gelectric CF6-80C2A5 matoorrada iyo A300B4-600R (F) ee FedEx, diiwaangelinta: N746FD, Serial Maya. 688, waxaa ku shaqeeya matoorada Pratt & Withney PW4158. Astaamaha: Nalalka soo degaya, liistada hubinta iyo firfircoonida duulimaad ee macquul ah ee ku saleysan buuga asalka ah. Dheeraad ah ayaa lagu daray: faylalka hawada (sifooyinka duulimaadka) dhammaan noocyada kale ee A300-600 sida A300-601, A300-603 iyo A300-620. Naqshadeeye: Brian Quayle, firfircoonida duulimaadka dhabta ah ee dhabta ah oo dib loogu soo celiyay Andre Lederer (Lionworks)
FS98 Curtiss H.16 Doonta Duulimaadka Weyn ee Mareykanka 1917
FS98 Curtiss H.16 Doonta Duulimaadka Weyn ee Mareykanka 1917. Doonta duula ee Curtiss H-16 "Large America" ​​waxaa la soo saaray 1917 waxayna matashay tallaabada ugu dambeysa ee isbeddelka naqshadaynta doonta duulaya ee Curtiss Model H. Iyada oo ka dheer H-12, oo la hagaajiyay, oo lagu xoojiyay Lt. Cmd. Cyril Porte, H-16's waxaa ku shaqeynayay 400 hp Liberty 12A matoorro, iyagoo ku guuleystay xawaare sare oo ah 95 mph heerka badda. Shirkadda Curtiss Airplane iyo Motoorka ee ku taal Hammondsport, iyo Warshaddii Diyaaradaha Naval ee Philadelphia waxay dhiseen wadar ahaan 334 H16 unug. Waxay ku hubeysnaayeen ilaa toddobo Lewis MGA, waxayna qaadi karaan 2x230 lb qoto dheer ama bambooyin 4x100 lb ah. Qeybta lagu sawiray sii-deyntaan waa Cutubka K29 oo ku saleysan RNAS Killinholme. Waxaa ku jira guddi khaas ah oo loogu talagalay cabirrada caadiga ah. Waxaa qoray Stephan Scholz.
FS98 Diyaarad Indy Air VA Boeing 737-900ER
FS98 Diyaarad Indy Air VA Boeing 737-900ER. Boeing 737-900ER ama Indy Air VA, diiwaangelinta N739IA oo leh matoorrada CFM56-7B-27. Astaamaha: Nalalka soo degida iyo liistada hubinta. Guddi ahaan diyaaraddan arag (fs98_B737max_panel.zip). Nooca diyaaradda asalka ah ee Rafael Hidd, astaamo duulimaad oo tayo sare leh (oo ku saleysan qorshaynta Duulista iyo Buugga Waxqabadka) iyo rinjiga Andre Lederer (Lionworks).
Monday, March 22 2021 23: 51
FS98 Guddi Boeing 737MAX Panel. Waxay soo bandhigtaa bandhigyo realCRT bilaash ah, TC-FMC (kumbuyuutarka maareynta duulimaadka), ACS-GPS, GPWS, dhawaaqa, radar cimilada, qiyaasta heerka shidaalka, gawaarida gawaarida, dhawaaqa bilowga mashiinka, bandhig aad u faa'iido badan oo kor u qaadaya kaas oo ka dhigaya degitaanka saxda ah mid aad u fudud, liiska hubinta dijitaalka ah , khariidad dhaqaaqaysa iyo waxyaabo badan oo faa'iido leh. Nooca labaad ee alaabada payware realCRT ee Tony D'Ambrosio ayaa sidoo kale lagu soo daray. Iyada oo ku saleysan asalka (737 NG panel) ee Andy Karlstetter. Waxaa lagu tijaabiyay 2D, 3D iyo shaashad buuxda oo illaa 1280x1024 ah. Waxaa qoray Andre Lederer (Lionworks).
Friday, March 05 2021 02: 23
Muuqaalka FS98 - Saint Petersburg
FS98 Muuqaal - Saint Petersburg. Muuqaal faahfaahsan oo ku saabsan Saint Petersburg (hore Leningrad), Ruushka waxaa ku jira garoonka diyaaradaha ee Pulkovo International (LED / ULLI) oo ku jira qaab dhismeedka hadda oo leh laba wado oo dhaadheer oo loo yaqaan 'ILS' oo loo yaqaan 'runways runways', terminal asal ah oo leh albaabbo, dhammaan hangarrada iyo dhismooyinka, inta badanna leh qaabab sawir leh, dhammaan navaids, ATIS / ATC, diyaaradaha duugga ah ee asalka ah, qalabka garoonka diyaaradaha iyo waxyaabo kale oo badan. Pulkovo waa dib-u-shaqeeyn muuqaalkeyga laga soo bilaabo 2004. Waxaa intaa dheer oo lagu daray: Puschkin Air Base (ULLP) oo leh waddo diyaaradeed oo dhererkeedu yahay 2500 mitir iyo tan u dhow Catherine Palace, oo ah hoyga adduunka ee caanka ah Amber Room! Madaarka Gorelovo / saldhigii hore ee hawada (ULLE) oo leh wadooyin dhaadheer oo dhererkoodu yahay 2500 mitir iyo garoonka diyaaradaha Rzhevka (RVH / ULSS) oo leh 1800 mitir oo runway ah. Muujinta muuqaalkani waa magaalada Saint Petersburg oo leh dhammaan astaamo muhiim ah sida habor, caanka caanka ah ee Jiilaalka, Kaniisadda Saint Isaac, Jidka dhiigga, Peter iyo Paul Fortress, Gazprom Arena iyo dabcan Xarunta cusub ee Lakhta - dhismaha ugu dheer Yurub. . Muuqaalkan waxaa lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo sawirada dayax gacmeedka cusub ee google Earth, jaantusyada garoonka asalka ah, wargelinta garoonka diyaaradaha. Waxaa sameeyay Andre Lederer (Lionworks).
FS98 Wuhan Airlines Xian X-7
FS98 Wuhan Airlines Xian X-7, diiwaangelinta B-3443. Naqshad leh qaybo dhaqdhaqaaq leh iyo nalalka soo degida. Asal ahaan waxaa qoray Pavel Hvatkin (An-24), FDE waxaana dib ugu cusbooneysiiyay Andre Lederer.
Thursday, February 18 2021 02: 11